Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Hawaii oo ka Warbixisay Burburkii Fulkaanaha Cusub
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Jabinta Hawaii • HITA • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Qiyaastii 3:20 pm Waqtiga Heerka Hawaii (HST) maanta, Arbaco, Sebtember 29, 2021, qarax ayaa ka qarxay gudaha Halemaʻumaʻu boholka Kīlauea ee kaldera, gudaha Beerta Qaranka ee Volcanoes Hawai'i.
Jeexitaanku wuxuu ka furmay harada hore ee lava ee ku taal boholaha xagga bari waxayna ka dhalinayaan qulqulka qulqulka dusha harada.
Hawo kale ayaa la furay abbaare 4:43 galabnimo maanta derbiga galbeed ee godka Halemaʻumaʻu.
Kormeeraha Fulkaanaha Hawaiian ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta laga bilaabo oranji ilaa cas, taasoo la micno ah in fulkaanaha hadda qarxay uu ku hoos jiro la -talin saacad.
Dillaacyada ayaa ka furmay bariga jasiiradda weyn ee ku dhex taal harada lava ee ka hawlgasha Halemaʻumaʻu godka laga bilaabo Diseembar 2020 illaa Maajo 2021, waxayna dhalinayaan qulqulka lava dusha harada weyn ee lava.
Qiyaastii 4:43 pm HST, marin kale ayaa ka furmay derbiga galbeed ee godka Halemaʻumaʻu.
Kormeeraha Fulkaanaha Hawaiian ayaa dhajiyay 3:40 galabnimo ee sawirka lava ee godka wax yar ka dib markii uu sare u qaaday heerka feejignaanta ee foolkaanaha ilaa saacad ka timid la -talin.
Sida laga soo xigtay Indho -indhaynta Fulkaanaha Hawaiian, galabta waxay keentay kororka dhulka iyo dhaqdhaqaaqa dhulgariirka. Heerka digniinta ayaa laga soo qaaday oranji ilaa casaan (digniin) abbaare 4:00 galabnimo Qiyaastii 17 dhulgariir ayaa waxaa duubay US Geological Survey (USGS) oo cabirkeedu ahaa 2.5-2.9 intii lagu jiray 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Iyada oo qaraxu si buuxda uga kooban yahay godka Halemaʻumaʻu, hadda ma jiraan wax khatar ah oo ku wajahan meelaha ay dadku ku nool yihiin. Saraakiishu waxay la socon doonaan dhaqdhaqaaqa iyo khataraha ka iman kara marka uu qaraxani sii socdo.
Hawaii Shira ayaa barteeda twitter -ka ku wadaagay wax ka yar nus saac ka hor: Wiilkaygu wuxuu sheegay inuu ogaaday kororka urta baaruudda dioxide markii uu u tegey inuu [wiilkiisa] ka qaado Dugsiga Charter Volcano galabta.
Markii ugu dambaysay ee Kilauea qarxay waxay ahayd markii ay bilaabatay bishii December 2020. Waxay sii wadday firdhinta lava ilaa May 2021. Qarxintaasi waxay abuurtay haro lava oo cusub oo ku taal dusha sare ee godadka.
Intii lagu guda jiray dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay, Kilauea waxay soo saartay in ka badan 41 milyan oo mitir kuyuubik, ama 11 milyan oo gallon, lava intii lagu jiray 157 maalmood oo ay si joogto ah u qarxaysay.
Lava ayaa isla aaggaas ka soo martay in 2018 markii Kilauea uu ka qarxay mid ka mid ah aagaggooda hoose. Qaraxani wuxuu ahaa kii ugu weynaa ee abid laga diiwaan geliyo volcano. Waxay burburisay guryo aad u badan waxayna barakicisay kumanaan qof.